လက်ရှိနှုန်းအတိုင်း ဆက်ပြန့်နှံ့နေပါက လာမည့် ၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အတွင်း အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းနှင့်အတူ ဥရောပတိုက် လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင် - Xinhua News Agency
ကိုပင်ဟေဂင် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) ဥရောပဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Hans Kluge က အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် “ အားကြီးသော ဒီလှိုင်း”ကဲ့သို့ ဥရောပတိုက်တွင် အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာဖြင့် ကူးစက်ပြန့်နှံ့လာနေကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် သတိပေး ပြောကြားလိုက်သည်။
“ မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်က အရှေ့ဘက်ကို ဆက်ပြီးကူးစက်ပြန့်နှံ့လာမှာကို ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အပြည့်အဝသက်ရောက်မှုဖြစ်လာမှာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ် ၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံရသေးသူတွေမှာ ရောဂါကူးစက်မှု ပိုပြီးပြင်းထန်မှာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါ” ဟု Kluge က ဆိုသည်။
အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် ယခုအခါ ဘောလ်ကန်ဒေသထဲတွင် ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီး ဥရောပ နှင့် ဗဟိုအာရှ ဒေသရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၅၃ နိုင်ငံအနက် နိုင်ငံ ၅၀ တွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း Kluge ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“ ဒီနှုန်းအတိုင်းဆက်ပြီး ကူးစက်နေမယ်ဆိုရင် လာမယ့် ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ် ကနေ ၈ ပတ်အတွင်း အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနဲ့အတူ အဲဒီဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ လူဦးရေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကူးစက်ခံရမယ်လို့ ကျန်းမာရေး တိုင်းတာမှုနဲအကဲဖြတ်ဌာန (IHME) က ခန့်မှန်းထားပါတယ်” ဟု Kkuge က ဆိုသည်။
ယင်းဒေသတွင် မကြုံစဖူးရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုခံယူရသည့် လူနာအရေအတွက်မှာလည်း မြင့်တင်လာနေကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ အဖျက်စွမ်းအား သက်ရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်မှာ “တံခါးပိတ်အခွင့်အလမ်း” လုပ်ဆောင်ထားစဉ်ကာလအတွင်း ဦးစားပေးတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်များ နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အပါအဝင် လက်တွေ့ကျသော လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း Kluge က ဆိုသည်။
ထိခိုက်လွယ်သောလူအုပ်စုအား ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် “ ကျန်းမာရေးစနစ်တွေနဲ့ မရှိမဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်” ဆောင်ရွက်ရန် အရေးပါမှုကိုလည်း ၎င်းက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အရာရှိကြီးက ကျောင်းများကို ဆက်လက်ဖွင့်ထားရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။“ ကျောင်းတွေကို ဆက်ပြီးဖွင့်ထားလို့ရမယ့် အကျိုးရလဒ်တွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ လူမှုဘဝ နဲ့ ပညာတတ်မြောက်ရေးအတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် ၊ ကျောင်းဆောင်တွေဟာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြန်ပိတ်ခြင်း နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ဖွင့်ခြင်းမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်” ဟု Kluge က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ကပ်ရောဂါတည်ငြိမ်စေရန် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် မန္တန်ငါးရပ်ဖြစ်သော ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခြင်း ၊ တတိယအကြိမ် သို့မဟုတ်အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ၊ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်မှုမြှင့်တင်ခြင်း ၊ အလုံပိတ်နေရာများ သို့မဟုတ် လူထူထပ်သောနေရာများရှောင်ရှားခြင်း နှင့် ဒဲလ်တာ သို့မဟုတ် အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်အား တုံ့ပြန်ရန် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုအသစ်ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုရှိနေခြင်းကြောင့် COVID-19 ရောဂါ ကုသရေးမှာ “အလှမ်းဝေးကွာနေဆဲ” ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဥရောပဆိုင်ရာရုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ထဲမှာ ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့နေရတာကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဆက်ပြီးရှိနေအုံးမယ် ၊ အဲဒါက အရှိန်အဟုန်နဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသလို စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေလည်း ကြုံတွေ့ရအုံးမယ်။ ကြိုတင်မှန်းဆလို့မရနိုင်တဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိနေဆဲပါပဲ ” ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ဥရောပဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိ Catherine Smallwood က ဆိုသည်။(Xinhua)
Over half population in Europe could be infected with Omicron Variant in6to 8 weeks at current spreading speed: WHO
COPENHAGEN, Jan. 11 (Xinhua) — World Health Organization (WHO) European Regional Director Hans Kluge warned on Tuesday that the Omicron variant could become more prevalent in Europe as the “tidal wave” of infections spreads eastward.
“I am also deeply concerned that as the variant moves east, we have yet to see its full impact in countries where levels of vaccination uptake are lower. We will see more severe disease in the unvaccinated,” said Kluge.
“What we’re seeing at the moment coming into 2022 is nowhere near that… We still haveavirus that’s evolving quite quickly and posing quite new challenges… and there’s stillalot of unpredictability, ” Catherine Smallwood, Senior Emergency Services Officer at WHO Europe said.
Photo – World Health Organization (WHO) Regional Director for Europe Hans Kluge attendsajoint press conference in Athens, Greece, on April 15, 2021. (Xinhua/Marios Lolos)